ညရှုခင်း – ရွှေတိဂုံ (ဓာတ်ပုံပိုစ့်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » ညရှုခင်း – ရွှေတိဂုံ (ဓာတ်ပုံပိုစ့်)
ညရှုခင်း – ရွှေတိဂုံ (ဓာတ်ပုံပိုစ့်)
Posted by Mလုလင် on Oct 9, 2013 in Cultures, Local Guides, Photography, Travel | 31 comments
မှတ်ချက်။ ။ ဘယ်လို ရိုက်ထားလဲ သိချင်ရင် comment မှာ မေးနိုင်ပါကြောင်း . . . . .
has written 50 post in this Website..
View all posts by Mလုလင် →
ဒုတိယပုံကို ဘယ်နေရာကရိုက်တာလဲဆိုတာ နားမလည်ဘူးဖြစ်နေတယ် မောင်ရင်ရဲ့ …
ဦး ချိုကြီး . . . ရေ . . . ကွက်တိပဲဗျို့  . . . ဦးပါရေ . . မြေနီကုန်းနားက အဲ့ဒီ့ နေရာ လေးမှာ ညဘက် ဆို လေလေး . တဖြူးဖြူးနဲ့ မြေပဲပြုတ်လေး စားပြီး . . ဇိမ်ခံ လို့ တယ်ကောင်းပဲ ဗျ . .
ဟုတ်တယ် သူကြီးရေ . . ဆြာအုပ် ပါရင် မိုးလာမယ် . . . . . မိုးရွာလို့ light truck နောက်ခန်းထဲကနေ ရိုက်ကြသေးတာ . . မိုးနဲနဲ စဲတာနဲ့ အပြင်ထွက်ကြတာ . .ကင်မရာ တောင် ရေနဲနဲ စိုသွားသေး . . . ဒါပေမယ့် . . ဒီနှစ်ပုံ မှာတော့ မိုးရေကြောင့် ဖြစ်တဲ့ reflection ပါဘူး . . :-) အခု မြင်နေရတဲ့ ရေက . . ရေပန်း အတွက် ဗျ . အဲ့ရေပန်းက . . ပွင့်လင်းရာသီ မှ ဖွင့်တာတဲ့ . . . .
ပထမပုံကတော့ ကန်တော်ကြီးထဲက ရိုက်တာဖြစ်မယ်။
ဒုတိယပုံကတော့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်က ရိုက်တာ ထင်တယ်။
ရွှေတိဂုံပုံ ၂ပုံရဖို့ အတော်သွားလိုက်ရမယ်။
ရန်ကုန် ထဲလောက်က တော့အေးဆေး . အေးဆေး . . . . . ပါပဲ အန်တီ မမ ရေ . . .
နှစ်ပုံလုံးတော်တော်ကောင်း၊ တော်တော်လှပါတယ် ကိုလု ရေ
ဦး ကြီးမိုက် နဲ့ အစ်မကြီး မအိ ရေ . . . ကျေးဇူးပါဗျာ . . ၂ပုံ ထဲလားဆိုတော့ ဖြစ်ပုံက . . တင်စရာ ကို ပုံ မရှိတော့ တာပါ ဗျို့  . . .။
ဒါဆို ကျန်တဲ့ပုံတွေ တစ်ခုခု ဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ်….
ပညာရှင်တွေများ ဘယ်လိုရိုက်ရိုက် ပုံထွက်ကောင်းပါလားကွယ်.
မစ်စတာ ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာ လုလင် ခညားးး
တစ်ခုလောက် မေးခွင့်ပုဘာ …။
အထက်ပါ နှစ်ပုံဂို ဘီလို ရိုက်ထားဒုန်းဆိုဒဲ့ ကိစနဘာ။
ဖင်ထောင်ပီး ရိုက်တာလား၊ မှောက်ယှက် ရိုက်ထားတာလား … ဆိုဒဲ့ ဆိုဒဲ့ ကိစနဘာဘဲ။
ပလိစ် .. ကျေးဇူးပုပီး ဖြေကျားပေးစေဂျင်ဘာဒယ် ခညားးး
ကို ဆောရိုး ရေ . . . ၀ါသနာ ရှင် ပါဗျာ . . . အံစာ . . ညီလေး . . ဖင်လဲ မထောင် . မှောက်လဲ မမှောက် . .ပေါက် ကွပြီး ရိုက် ကြောင်း . . . (အဲ့ဒါ ငါ့ မူပိုင် ပိုစ့်)
ပထမပုံက ကန်တော်ကြီး မြောက်ဘက်စင်ပေါ်ကနေရိုက်တာဖြစ်ပြီး
ဒုတိယပုံကတော့ ပြည့်သူ့ရင်ပြင် ရေကန်ကြီးရဲ့ အနောက်ဘက်အဖျားကနေရိုက်ထားတာပါ။
ပြည့်သူရင်ပြင်ထဲဝင်ပေါက် မသိတော့ ကားတစ်ပါတ်မောင်းရပါတယ်။
အထဲလဲရောက်ရော မိုးတွေရွာလို့ နာရီဝက်လောက်ကားပေါ်မှာထိုင်စောင့်ရပါတယ်။
မိုးတိတ်တော့ ဆက်သွားတာ လမ်းတွေမှားပြီး လရောင်မကြိုက်တဲ့ချစ်သူတွေကြားရောက်သွားပါတယ်။
ကိုခိုင်ပြောသလိုဘဲ မိုးရွာလိုက်တာ ကျနော်တို့အတွက် ရောင်ပြန်ဆလိုက်ပြားတွေချထားပေးလိုက်သလိုပါဘဲ။
အဲရောက်တော့ သူက တစ်နေရာ ကျနော်က တစ်နေရာဖြစ်သွားပါတယ်။.
နောက်တော့ စာအုပ်ကို ၀င်ခေါ်ပြီးကန်တော်ကြီးကိုသွားပါတယ်.။
အဲဒီကမှ ကျနော်တည်းတဲ့ ရွှေဂုံတိုင် ယုဇနပလာဇာခေါင်မိုး 11ထပ်ကနေ ဆက်ရိုက်ကြတာ ည 11ရီအထိပါ.
ကလု ကိုယ်စား အတူသွားသူက ၀င်ဖြေပေးလိုက်ပါကြောင်း။
ဒုတိယပုံလေးမျုိး ကျနော်မရလိုက်ဘူးဗျ ဟိုဘက်ကို သွားမဲနေလို့
lele kyi says:
ဆြာလုင်..ကင်မလာ ဆက်တင် တွေ ပြောပြလို့ရမလား။
ပထမ ပုံက FNumber –9, Shutter Speed 10s, ISO 100
ဒုတိယ ပုံက FNumber – 8 , Shutter Speed 20 s, ISO 100
Camera Setting ကတော့ အပေါ်ကအတိုင်းပါပဲ . . ဗျ . .ဒါပေမယ့် . . သူများ အဲ့ Setting နဲ့ ရိုက်လို့ ကိုယ် ဒီလို Setting နဲ့ ရိုက်ရမယ် လို့ မဆိုလိုပါဘူးဗျ . .။ ကိုယ်ပြ ချင်တဲ့ . . ရသ အတွက် Setting တွေ အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ် . . ။ ကျွန်တော် က ရေမျက်နှာပြင် ကို ချောမွေ့ ပြီးပြင်လိုက်ဖြစ်နေစေချင်လို့ Shutter Speed တွေ ချ ထားတဲ့သဘောပါ။ Long Exposure နည်းလို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်ဗျ . . . .။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်က . . မီးလုံး တွေကို ကြယ်တွေ လို အစွန်း တွေ မထွက် စေချင်လို့ပါဗျ . . .။
ဘယ်လိုရိုက်ထားတယ် ဆိုတာကိုလဲ စိတ်ဝင်စားပါကြောင်း
တင်ထားထည်း က . .ဆိုက် ကြီး ဗျ . . သကြား ရ . . .လုပ်ချင်တာ လုပ် . .
ချစ်လှစွာသော သဂျီးက ဆိုက်ပြန်ချုံ့ထားတယ်ဗျ
(နောက်တခါ ဘုရားကို အမြင့်ကရိုက်ချင်ရင် SSC ဆေးရုံအပေါ်ဆုံးထပ်ကရိုက်ကြည့်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
တူလေး တယောက်ရိုက်ထားတာ တော်တော်လှပါတယ်။
ဟုတ် . .ကျေးကျေး အန်တီ ဒုံ ရေ . . . သွားရိုက်ဖြစ်အောင် ရိုက်လိုက်မယ်ဗျ . .
ဒီတစ်ခါလာရင် မမာ ပြောတဲ့အပေါ်ကသွားရိုက်ကြမယ်ဗျို့
ရိုက်တတ်သူ မြင်တတ်သူက ရိုက်တော့လည်း
ရိုးနေတဲ့ မြင်ကွင်းက ဆန်းသွားရော
ဒါပေ့ မဲ့…..ဖူးလို့ ကိုမဝပါဘူးလေ
ဒါကြောင့် ဒီလိုလေးကုသိုလ်ယူတဲ့ အတွက်သာဓုခေါ်လိုက်ပါတယ်
ဦး ကြိမ် says:
M လုလင်ခင်ဗျား………
ကျ နော့မှာ SONY NEX – 5C တလုံးရှိပါတယ်
အဝေးရိုက်ရန်အတွက်ZOON ဝယ်ချင်ပါတယ်….ဈေးအများကြီးလည်းမတတ်နိူင်ပါ
SECOND ဝယ်မည်ဆိုလျင်ရောင်း သည့်နေရာနှင့်ခန့်မှန်းချေ ဈေးနူနူ်းလည်းသိချင်ပါတယ်
ကျနော့ကင်မလာနဲ့ အဆင်ပြေမဲ့ ဆိုဒ် နံပါတ်ကိုလည်းလမ်းညွန်ပေးပါအုံးခင်ဗျား
အစ်ကို ရေ . . ပထမဆုံးပြောချင်တာက ကျွန်တော် အလုံးကြီး မကိုင် တော့ပဲ အလုံးသေးပဲ ကိုင်တော့မယ် လို့ ဆုံးဖြတ် ဖြစ်ရင် အဲ့ဒိ့ Sony ကို ကျိန်းသေပေါက် ၀ယ်ကိုင် ဖြစ်မယ် ဆိုတာကိုပါ။ မှန်ဘီလူးက . . ကိုယ်ဘယ်လို ပုံမျိုး အဓိက ထားရိုက် ချင်သလဲ ဆိုတာပေါ် မူတည်ပြီး ၀ယ်ရတာပါ။ ဒါပေမယ့်လဲ . . One Body, One Lens ဖြစ်တဲ့ Beginner ရယ်လို့ ကျွန်တော် မတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။ ၂ မျိုးလောက် တော့ ၀ယ်ကြတာပါပဲ။ အစ်ကို အနေ နဲ့ အစပိုင်း သုံးကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ . . . Normal Kit Lens ဆို အဆင်ပြေ လောက်မှာပါ။ Canon မှာဆို ရင် 18 – 55 mm လို Lens မျိုးပါ။ Sony Second Hand ဈေးနှုန်းနဲ့ ပတ်သက် ပြီး ကျိန်းသေပေါက် မပြောနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ။ ဘားလမ်းထဲက Technoland ကို သွားကြည့်လိုက်ပါလား . . . .
နှစ်ပုံလုံးလှတယ်။ ဒုတိယပုံလေးကတော့ပိုလှတယ်။ အပေါ်မှာခွင့်ပြုထားတာတွေ့လို့ ကွန်ပူတာ ဝေါပေပါလုပ်ဖို့ယူသွားပါတယ်။ ထပ်ခွင့်မတောင်းတော့ဘူးရယ်။